Wholesale Power Chikamu fekitori nevatengesi | YakadzikaFast
Chikamu chemagetsi ndicho chakakosha chikamu chekudonha mota. Isu tinotsanangura chikamu chemagetsi neayo yekunze tube dhayamita. rotor / stator lobe kumisikidzwa uye huwandu hwematanho. SGDF inogona kupa mota kubva 2 7/8 kusvika 11 1/4. Kazhinji, mota inogona kuburitsa yakawanda torque uye simba sezvo saizi yehubhu ichiwedzera. Iyo rotor uye stator zvakagadzirwa sezvinhu zvine helical zvine hombe uye diki dhayamita. Lobe iri rakakomberedzwa rakatenderera chimiro chakaumbwa nemusiyano muhukuru uye hudiki dhayamita.
Iyo stator ine rimwezve lobe kupfuura iro rotor. Musiyano wemalobe unogadzira inzvimbo yemvura inopinda (mhango) apo mvura inogona kupomberwa kuburikidza nekugadzira kutenderera. Chidanho chinhambwe chakayerwa chinoenderana neiyo axis pakati pemapoinzi maviri anoenderana eiyo mweya wekukwirisa .Rutivi urwu rwunowanzo kunzi mutungamiriri we stator. Iyo torque uye yekumhanyisa mwero inogona kusiyaniswa nekuchinja lobes uye nhanho. Kazhinji kutaura, mota ine lobes yakawanda inogona kuburitsa torque yakawanda, mota ine lobes shoma inogona kuva neiyo inomhanya-mhanyisa chiyero. Kune rimwe divi, torque inogona kuwedzerwa nekuwedzera mamwe matanho. Saka, kune nzira mbiri dzekuwedzera iyo torque: kutanga, wedzera iyo rotor / stator lobes; chechipiri, wedzera madanho emota.
High tembiricha nemishonga
Oiri uye kushorwa kwemvura
Isu tinoita elastomer kuvandudza uye kugadzira mukubatana pamwe nedzidzo nesainzi masangano muEurope kune epamberi mhinduro.
Yedu yekutengesa cheni yevagadziri vesimbi ine mukurumbira wenyika uye wepasirese mukurumbira inotibvumidza kuunza mota dzakasimba kwazvo kumusika. Sarudzo yedu yekungwarira yezvakakosha mamakisi emamota edu inopa mashandiro anodiwa.
Iyo yakakwana kukwana uye hwakareba hupenyu hweedu elastomers anoita mutsauko mukuita. Isu tinoshandisa yedu yakadzika ruzivo rwefizikisi zvakananga kune chigadzirwa kune mhedzisiro vatengi vedu vanovimba nezuva rega rega.
HUNHU HWECHIKAMU CHESIMBA
Angangoita makumi matatu kusvika makumi mashanu muzana torque kupfuura zvakajairika mota dzinodzika.
Angangoita makumi mashanu kusvika zana muzana akavandudza mashandiro zvichienzaniswa neayo eakajairika mamotor emota nekuda kwemashanu-axis ekugaya michina ye rotors uye stators.
Inokodzera Yakakwira Tembiricha
Inoshanda Mune OBM
Pashure: Two-Stage uye Two-Speed ​​Drilling Tools
Zvadaro: Downhole Motokari
120mm Simba Chikamu
135mm Simba Chikamu
165mm Simba Chikamu
95mm Simba Chikamu